एउटै देशमा साढे २ करोड मानिस कोरोना भाइरस संक्रमित, पूरै विश्वको भन्दा धेरै !
July 20, 2020 1584
इरानका राष्ट्रपति हसन रुहा’नीले आफ्नो देशमा २ करोड ५० लाख जनता कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएको बताएका छन् ।
उनले अहिले’सम्म अढाइ करोड संत्र,मित भइसकेको र आगामी दिनमा करिब साढे ३ करोड जनता संक्र’मित हुन सक्ने आशं’का भएको पनि बताएका छन् ।
शनिबार देशको कोरोनाभा’इरस नियन्त्रणसम्बन्धी टास्क फोर्सको बैठकमा राष्ट्रपतिले यस्तो अल जजिरा मा ख’बर छ । यो बैठकको टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो ।
राष्ट्रपति रुहानीले देशका कूल संक्रमित’को संख्या अढाइ करोड पुगिसकेको बताइरहँदा इरानको आधि’कारिक तथ्यांकमा भने यहाँ २ लाख ८३ हजार जना संक्र’मित भएको पुष्टि भएको छ भने १४ ह’जार १ सय जनताको मृत्यु भएको छ ।
८ करोड जनसंख्या भएको इरा’नका एक चौथाइभन्दा बढी जनता संक्रमित भइसक्दा पनि इरान अझैसम्म ‘हर्ड इम्युनिटी’को अवस्थामा पुग्न नसकेको समेत राष्ट्रप’ति रुहानीले बताए’का छन् ।
कुनै पनि इरानी उच्च अधिकारीले देशले ‘हर्ड इम्युनिटी’को माध्यमबाट कोरोनाभाइरसलाई पराजि’त गर्न लागेको ब’ताएको यो पहिलो पटक हो ।
‘हामीले अहिलेसम्म हर्ड इम्युनिटी हासिल गरि’सकेका छैनौं र हामीसँग एकताबद्ध भएर कोरोना’भाइरस प्रसारणको चेन तोड्नुको विकल्प छैन’ इरान’को स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनको नति’जा उद्धृत गर्दै उनले भने ।
रुहानीको अभिव्यक्तिको केही घण्टापछि उनका डेप्युटी हेड अफ कम्युनि’केशन अलिरेजा मोए’जीले ट्वीट गर्दै अढाइ करोड संक्रमितमा भाइरसको सम्पर्कमा आएर पूर्ण रुपमा प्रति’रोधी क्षमता हासिल गरिसकेकाहरु पनि गणना गरिएको बताए ।
इरान मध्यपूर्वमा सबैभन्दा न’राम्रोसँग प्रभावित भएको देश हो । अहिलेसम्म विश्वभर ६ लाख ८ हजारभन्दा बढीको कोरोनाभाइरसका कारण मृ’त्यु भइसकेको छ र १ करोड ४६ लाख’भन्दा बढी संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ ।
विश्वभर पुष्टि भएको संक्रमणको आधारमा हेर्ने हो भने इरानको अढाइ करोडको तथ्यांक पूरै विश्वको भन्दा झण्डै दोबर हुन आउँछ । – डिसी नेपाल (फाइल तस्बिर)
Prevमृत’कका परिवारका पाँच जनामा कोरोना संक्रमण भेटियो
Nextयी हुन् : कोरोना मुक्त भएका नेपालका ७ जिल्ला
तिहार र छठ-पछि कडा लकडाउन गर्ने तयारी !
आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? सम्पूर्ण विवरण सहित
दक्षिण कोरियाको उपभोक्ता मूल्य एक प्रति’शतले वृद्धि